Jihan Saadaat : Xaaskii awoodda badneyd ee Anwar Saadaat – Kaydka Xogaha Dahsoon Iyo Xaqiiqooyinka Foolaad.com
HomeMAQAALLOJihan Saadaat : Xaaskii awoodda badneyd ee Anwar Saadaat
Waxka baro Marwadii Awooda badnayd ee Madaxwayne Saadat
July 13, 2021 Admin@ MAQAALLO 0
Heshiskaas wuxuu ka careeysiiyay dadweyne badan oo reer Masar ah, waxaana Masar ka dhacay dibadbaxyo rabshada wata oo looga soo horjeedo arrintaas.
Masar dagaal toos ah maku qaadi kartaa Itoobiya?
Doorashada Masar: Garyaqaan caan ah oo isaga haray tartanka doorashada Masar
Wax ka ogow dariiqada Suufiyada Masar
Labo sano kadib markii heshiiskaas saxeexay, waxaa laga soo dhaweeyay guud ahaan caalamka basle waxaa laga cambaareeyay dunida carabta. markii dambe waxaa la toogtay Anwar Saadaat xilli uu ku sugnaa goob ay militeriga gaaddo ka ciyaar kusoo bandhigayay magaalada Qaahira xilliggaas oo loo dabaaldegayay dagaalkii Masar iyo Israa’iil ee sanadkii 1973.
Markii la dilay Anwar Saadaat, Jihan muddo sanad ah ah indho lamaa saarin iyadoo ka murugeysaneyd dilka seygeeda.
Waxay markii dambe u bilowday in bare ay ka noqoto jaamacadda Qaahira halkaas oo ay ka diyaarineysay waxbarahseeda PHD-da
Sanadkii 1984, guddoomiyihii jaamacadda gobolka South Carolina ee dalka Mareykanka ayaa ka codsaday inay bare ka noqotao halkaas, markii dambena wey ka aqbashay.
Waxay sidoo kale wax ka dhigi jirtay jaamacadda American University ee ku taalla Washington.
Sanadkii 1986 waxay isaga tegtay jaamacadda South Carolina, waxay markii profasoor ka noqotay jaamacadda Radford ee gobolka Virginia.
Jihan Al Saadaat waxay sanadkii 1993 noqotay profesaroor cilmiga xiriirka caalamiga ah ka noqotay jaamacadda Maryland ee Mareykanka.
Waa kuma Leo Tolistoy